Imigangatho yeNdlela yokuDlisa abaMgangatho kunye neyabantu abathile China Manufacturer
Inkcazo:Umda wemveliso yokondla,Umgangatho wokuBonelela ngoMgangatho 3 ku-1,Cinezela 3 Kwi-1 feeder
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Imigangatho yeNdlela yokuDlisa abaMgangatho kunye neyabantu abathile
Umzekelo No.: MAC4-800H
Imigca yokuDityaniswa kweKhola emileyo kunye neLungelo lokulinganisa eyenzelwe izinto ezinamandla aphezulu iyilelwe ukwenza izitovu ezomeleleyo ezinamandla awomeleleyo ngaphezulu kwe-400Mpa.
Imigca yokuDityaniswa kweKhola emileyo kunye neyomntu ngamnye enomgangatho ofanayo nayo yonke imisebenzi esemgangathweni. Uyilo olucwangcisiweyo, olugqibeleleyo lwe-ergonomic kunye neesimboli ezicacileyo, ezenza ukuba kube lula ukusebenza kunye nolondolozo ngokulula.
Zifane yethu kunye Lines Ikhoyili Ukondla ngamnye unako ukusebenza ububanzi izinto coil ukusuka 400mm ukuya 1800mm, coil okusuka 0.6-9.0mm, ubunzima coil ukuya 25000kgs.
Uluhlu lweemveliso zethu luqonda ukuDityaniswa kweMigangatho eKhatywayo neyomntu ngamnye ngokokuqhelekileyo kunye noyilo olumbumbano, lokondla ngezinto zekhoyili koomatshini bokushicilela kunye nakwimigca yokufota.
I-MAC4 ekumgangatho ofanelekileyo kunye neLungelo lokuLungiselela iiNdawo zoMbane ezisebenza ngokusebenza kumzi-mveliso wabathengi bethu.
Imigca yokuDityaniswa kweKhola emileyo kunye neyomntu ngamnye eyenziweyo ngokwenza umgca wokukhusela umtya wephepha lokubambisa.
Lo matshini usebenza esebenzela omnye umzi-mveliso wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U ezinemigangatho yokulinganisa neyomntu ngamnye.
Umda wemveliso yokondla Umgangatho wokuBonelela ngoMgangatho 3 ku-1 Cinezela 3 Kwi-1 feeder Umtya weMveliso yokondla Umgca wemveliso yeemoto Umgca wemveliso yeziLwanyana Ukunyathela umgca wemveliso yokuZenzekelayo Oomatshini bemveliso yeemoto